Nas 190 days ago
country_boy 190 days ago
Aggressive 190 days ago
Khaobaadi_Netaa 189 days ago
Nas 188 days ago
ह्वात्तै बड्यो citizenship application fee
ICE द्वारा भारतीयहरू धमाधम डिपोर्ट हुदै - नक्कली बिश्वबिध्यालय बाट करीब 250 foreign बिध्यार्थी पक्राउ
Visitor is reading तुलसीले अन्तत् हार स्वीकारीन्
Visitor is reading Amazing Quotes of Nepali Politics
Visitor is reading 35 million pound win, biggest lottery win in Britiish histor
Visitor is reading सजिनचाको ग्वारामरी
Visitor is reading Nepal bata USA paisa lyaune kasari hola?
Visitor from DE is reading *Top 21 thingsaNepali does after returning from USA*
Visitor is reading End of D/S for F1 status Only2or4years allowed to stay i
Visitor is reading New National Anthem
Visitor is reading staff nurses wanted
Posted on 03-19-20 11:58 AM Reply [Subscribe]
"Representative Tulsi Gabbard of Hawaii, who ranaforeign policy-focused campaign for the presidential nomination ofaparty she sharply criticized, announced on Thursday that she was dropping out of the race."
Posted on 03-19-20 12:27 PM [Snapshot: 10] Reply [Subscribe]
सार्है नै दुखि लाग्यो ... यो समाचार पढेर ! तर तुलसी दिदिले बाइदेनलाइ सपोर्ट गर्न भाको कुरा पटक्कै चित्त बुझेंन ! लास्ट इलेक्सनमा दिदीले आफ्नो डि. एन. सीको पद त्याग्न भएर , फुंडी क्लिन्टनसंग टक्कर लिंदै बर्नीलाइ सपोर्ट गर्न भाको थियो ! तर यो इलेक्सनमा जब मेन स्ट्रिम मिडियाले दिदिलाइ साइड लाइन लगाउदा .... त्यो अँनग्रेटफुल खाते कुक्कुर बर्नीले दिदिको सपोर्टमा एक शब्द नि बोलेना ! सी एन एनले हरेक पल्ट दिदिको खिलाब सड्यन्त्र गर्दा यो कुक्कुरले आफ्नो मुखमा बुझो हाली बस्यो ! थुक्क पाजी कुक्कुर ! तिमि दुइ बाइदेन र स्यान्दर्सलाइ करोना भाइरस लागि हालोस !
येस्पाली तेसो भए हाम्री प्यारो ट्रंप बाबालाई नै भोट हालिन्छ ! र सम्पूर्ण मेरा प्यारा नेपालीहरुलाइ पनि ट्रंप बाबालाइ नै भोट हाल्न अनुरोध गर्दछु !
Posted on 03-19-20 3:23 PM [Snapshot: 165] Reply [Subscribe]
@Nas chor mula timra त टडम्प भइ सक्यो मुला रेसिस्ट, नेपालीले गरिखाको देख्न नसक्ने,
Posted on 03-19-20 3:26 PM [Snapshot: 172] Reply [Subscribe]
support you @nas.
Posted on 03-19-20 4:26 PM [Snapshot: 223] Reply [Subscribe]
कन्ट्री ब्रो ... हाम्रो बाबा त्रम्प रेशिस्ट होइन ब्रो ... मैले यो गलत लान्छनाको पहिला नै अरु धागोमा स्पसटीकरण दि सकेको छु ब्रो ! उहा एउटा असल देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी रास्ट्रपति हुन् ! आफ्नो देश र जनताको हित सरोपर राख्न गलत होइन ! उहाले त् भन्नु भाको छ नि यो देशमा लिगल्ली भित्र आउनु ...मेक्सीकोको बोर्डर क्रस गरेर इल्लिगल्ली नआउनु भनेको कुरो गलत होइन नि ! मेरो बिचारमा नेपालिहरु सबै लिगल्ली नै यहा आउनु भाका छन् !
कन्ट्री ब्रोले पनि ट्रंपलाइ नै भोट हाल्न बिनम्र अनुरोध गर्दछु !
Posted on 03-19-20 5:16 PM [Snapshot: 278] Reply [Subscribe]
@Nas हाहा टडम्प को धोती खुस्किसक्यो के सरजि, उस्तै परे आफ्नो बुढी बिना अरु महिलाहरु सँग खाना नखाने लाई दिएर सत्ता सुम्पेर बन्नि रेैन्च तिर जान बेर लाग्नुहुन्न जस्तो भै सक्यो, कुरा बढि बुझ्ने के सरजि पनि। अझै भोटै पो हाल्ने रे ल ल स्विङ स्टेट मा नभए त एउटा मात्र के टन्नै हालम न क्या जाता हे।
Posted on 03-19-20 5:30 PM [Snapshot: 288] Reply [Subscribe]
आफ्नो स्टेट त् ब्लु स्टेट पर्यो ... निउ योर्क ! लास्ट टाइम बाबाको क्याम्पेनमा डटेर नै लागियो ! येस्पली तुलसी दिदि नोमिनेट हुन् भाको भए उहालाई समर्थन गर्ने प्लान थियो तर ... ठिक्कै छ ! हाम्रो बाबा जिन्दाबाद !
प्लिज मेरा प्यारा नेपालीहरु .... येसपाली नि बाबालाई नै जिताउन पर्छ है ! 😁
Last edited: 19-Mar-20 05:30 PM
Posted on 03-20-20 10:48 AM [Snapshot: 518] Reply [Subscribe]
आइ एम सो डीसअपोइनंटेड विथ तुलसी दिदि ! उहाले मेरो चित्त सार्है दुखाउन भाको छ बाइदेनलाइ आफ्नो सपोर्ट दिन भएर ! मेरो आशा, भरोशा, "फेथ" सब मारिदिनु भो ! उहा मलाइ एक दम अनेस्ट र प्रिन्सिपल्ड़ पलिटिसियेन लागेको थियो तर उहाले आफ्नो त्रु कलर देखाउन भो ....दिदि तुलसी जो एनटि वार प्लेटफर्ममा उठ्न भाको थियो ... उहाले नै ठिक उल्टो वार-मंगर, पेड़ोफाइल बाइदेनलाइ सपोर्ट गर्न भो ! अवस्य पनि बाइदेनले उहालाई कुनै पद अफर गरेको हुन् पर्छ ! उहाले आफ्नो प्रिन्सिपललाइ छाड्न भएर आफ्नो करीएरलाइ प्राथमिकता दिन भो ! उहालाई मैले डाक्टर रन पलको दर्जामा राखेको थिए तर उहा तेस्को लायक हुनु हुँदो रहेन छ ! उसै त् यी आइमाईहरु प्रति मेरो भरोसा उडिसकेको थियो .... शी हिट द् फाइनल नेल अँन द् कफिन !
Last edited: 20-Mar-20 10:48 AM
Posted on 03-20-20 2:21 PM [Snapshot: 601] Reply [Subscribe]
हिलारीलाई troll गरी गरी र्याग गर्न मात्र अदालतमा मान हानीको मुद्दा हालेकी हुनत तुलसीले ?
राजनीती बाट अबकाश लीई न्युयोर्क स्टेटको रमणीय countryside तीर चुपचाप आन्नद साथ बुडेसकाल बिताएकी भए हिलारीलाई कसैले खासै कोट्याउने मेसो गर्ने थिएनन् क्यार ।
Last edited: 20-Mar-20 02:23 PM
Posted on 03-21-20 12:26 PM [Snapshot: 792] Reply [Subscribe]
हो हो यो रन्डी क्लिन्टनलाइ चयनले बस्न नदिनुस् तुलसी दिदि ! हजुरलाइ रस्सियेंन एजेन्ट भनेर मान हानि गरेको होइन .... यो फुंडीले !